ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်သလို တကိုယ်လုံးကိုလှုပ်ပြီး အမိုက်စား ဆက်ဆီကကွက်လေးနဲ့ ကပြလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ကိုဆွဲကိုင်လှုပ်သလို တကိုယ်လုံးကိုလှုပ်ပြီး အမိုက်စား ဆက်ဆီကကွက်လေးနဲ့ ကပြလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ဒါ က တော့ အလှမယ် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေ့စံ ရဲ့ ခါးလေး ကိုလှုပ် လှုပ် ပြီး ရင်ခုန် စရာ ကကွက် လေးတွေ နဲ့ ကပြထားတဲ့ Tik Tok Video လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ ကနေ တာ လေးဟာ လည်း မြင်ရ သူတိုင်း ကို ဟင်ကနဲ ဟာကနဲ ဖြစ်သွား စေ မှာ အမှန်ပါပဲ နော် … . ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့်ရှု ခံစားနိုင် အောင် နန်းမွေစံ ရဲ့ Tik Tok Video လေးကို တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါ တယ် နော်..။
ဆက်ဆီ မော်ဒယ် တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ် တည် လျက် ရှိနေ သူက တော့ နန်းမွေစံ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမ ဟာ ဆရာ ဝန် အလုပ်ကို စွန့်လွှတ် ကာ ဝါသနာ ပါရာ အနု ပညာ အလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဝေဖန်မှုတွေ များစွာ နဲ့ ရင်ဆိုင် နေ ရသော် လည်း ကြံ့ကြံ့ခံ ကာ ရှေ့ဆက် လျှောက် ရမယ့် ပန်းတိုင် ကို မရောက် ရောက်အောင် သွားနေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ် ပါ တယ်… ။
နန်းမွေစံ ရဲ့ ကျစ် လစ် လှပ တဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို လည်း ပုရိသ တွေ က စွဲမက် နေကြတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေး တွေ ဟာ လည်း လူမှုကွန်ယက် စာ မျက်နှာမှာ အရမ်း ကို ရေပန်းစား နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခု မှာ လည်း သူမရဲ့ Tik Tok အကောင့် မှာ ဗီဒီယို လေး တစ်ခု တင်ထား တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိတ်သတ် ကြီးလည်း မျှ ဝေ ခံစားလို့ ရအောင် တင်ဆက် ပေး လိုက် ရ ပါတယ် နော် … .
source and photo crd : Nan Mwe San ’ s Facebook and Tik Tok Account
ဒါ က ေတာ့ အလွမယ္ ေမာ္ဒယ္လ္ နန္းေမြ႕စံ ရဲ့ ခါးေလး ကိုလႈပ္ လႈပ္ ၿပီး ရင္ခုန္ စရာ ကကြက္ ေလးေတြ နဲ႔ ကျပထားတဲ့ Tik Tok Video ေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ ကေန တာ ေလးဟာ လည္း ျမင္ရ သူတိုင္း ကို ဟင္ကနဲ ဟာကနဲ ျဖစ္သြား ေစ မွာ အမွန္ပါပဲ ေနာ္ … . ပရိသတ္ ေတြ လည္း ၾကည့္ရႈ ခံစားနိုင္ ေအာင္ နန္းေမြစံ ရဲ့ Tik Tok Video ေလးကို တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရပါ တယ္ ေနာ္..။
ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ရပ္ တည္ လ်က္ ရွိေန သူက ေတာ့ နန္းေမြစံ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ သူမ ဟာ ဆရာ ဝန္ အလုပ္ကို စြန႔္လႊတ္ ကာ ဝါသနာ ပါရာ အႏု ပညာ အလုပ္ေတြ ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေန တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေဝဖန္မႈေတြ မ်ားစြာ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ေန ရေသာ္ လည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံ ကာ ေရွ႕ဆက္ ေလၽွာက္ ရမယ့္ ပန္းတိုင္ ကို မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ သြားေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္… ။
နန္းေမြစံ ရဲ့ က်စ္ လစ္ လွပ တဲ့ ကိုယ္လုံးေလး ကို လည္း ပုရိသ ေတြ က စြဲမက္ ေနၾကတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ဟာ လည္း လူမႈကြန္ယက္ စာ မ်က္ႏွာမွာ အရမ္း ကို ေရပန္းစား ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခု မွာ လည္း သူမရဲ့ Tik Tok အေကာင့္ မွာ ဗီဒီယို ေလး တစ္ခု တင္ထား တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိတ္သတ္ ႀကီးလည္း မၽွ ေဝ ခံစားလို႔ ရေအာင္ တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရ ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ရေထဲကထွက်လာပြီး အရမ်းမိုက်တဲ့ ဆက်ဆီဒန့်လေးကို အလန်းစားလေးစွဲပြလိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်း စပါယ်ရှယ်ရင်ခုန်သွားစေ မယ့် သဇင်ဦးရဲ့ ထိမိတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင်